काठमाडौं : 'अनुसन्धानको घेरा साँघुरिएको छ। भेटिएका प्रमाणलाई भेरिफाइ र प्राविधिक पक्षबाट हेरिरहेका छौं।' केही दिनअघि निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान के भइरहेको छ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले दिएको जवाफ यही हो। तीन वर्षमा नेपाल प्रहरीका आधा दर्जन जति प्रवक्ता फेरिए, हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा…
शौचालयमा प्रयोगकर्ताहरुको हात स्वच्छताको परिक्षण
काठमाडौं । हात सफा राखौं सुरक्षित रहन एकजुट होऔं भन्ने नारासहित विश्वभर हातको स्वच्छता दिवस मनाइकाे छ । शौचालय प्रयोग पछि यस्लाई प्रारम्भिक कक्षा देखि सिकाउनु पर्ने आवश्यकता लाई औंल्याउँदै मानिसको व्यवहार परिवर्तन नै स्वस्थ जीवन यापनका आधार भएको कुरा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख प्रशासक नोड‌नारायण चौधरीले बताउनुभयाे । विश्व हातको […]
कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका-३ का थारु समुदायका व्यक्ति परम्परागत सीपको प्रयोग गरी बाँसको डालो बुन्दै । घाँस बोक्न र घरायसी सामान राख्नका लागि डालोको प्रयोग हुने गरेको छ । तस्वीरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
साबुनपानी प्रयोग गरी हात सफा राख्नुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने एउटा प्रभावकारी उपाय मानिए पनि सबैका लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा वेलावेलामा हात धुनुचाहिँ कसरी ? देशमा कोभिड–१९ को...
अफगानिस्तानको बागराम एयरबेस हात पार्न खोज्दै चीन, सतर्क भारत
अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि चीनले काबुल बाहिर रहेको बागराम एयरबेस हात पार्न खोजेको छ । चीनले उक्त एयरबेस भारतका विरुद्ध प्रयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाकी पूर्व राजदूत निक्की हेलीले बताएकी छन् । बागराम एयरबेस २० वर्षसम्म अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो सैन्य अड्डा थियो । आतंकवादीहरूका विरुद्ध हवाई आक्रमण गर्न अमेरिकाले यसको उपयोग गर्ने गरेको थियो । हेलीका अनुसार, अमेरिका जस्तो तरिकाले अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको छ त्यसबाट जिहादीहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरू यसलाई आफ्नो नैतिक जीत मानिरहेका छन् । ...
कस्तो सेनिटाइजर छालाका लागि उपयुक्त हुन्छ ?
घर बाहिर निस्किदा जहाँ पानी हुँदेन त्यहाँ हामी हात सफा गर्न ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गर्छौँ । सेनिटाइजर कोरोना भाइरसको महामारी अगाडि पनि प्रयोग हुने सामान हो ।
एमआईटीले बनायो सस्तो प्रोस्थेटिक हात
एमआईटीले सस्तो प्रोस्थेटिक हात बनाएको छ । जसले हात विच्छेदन भएकाहरुलाई महसुस गर्न दिनेछ । न्यूरोप्रोस्थेटिक हरेक वर्ष एकदमै विकास हुँदै गईरहेको छ । एमआईटीले साङ्भाई जिओ टोङ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर ५०० डलर पर्ने न्यूरोप्रोस्थेटिक निर्माण गरेका छन् । यसमा प्रयोग अघि हातैले बनाइएको ईकोफ्लेक्स नामक इलास्टोमिटरमा हावा भरिएको हुनुपर्छ । यो डिभाइसमा विद्युतीय...
ICT Samachar श्रावण २०७८
मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) महामारीबाट जोगिनका लागि मुख्य हतियार भनेकै मास्क र सेनिटाइजर हो । संक्रमणबाट जोगिनका लागि अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने गरिन्छ । साथै, साबुनपानीले हात सफा गर्न सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्ने यिनै मास्क र सेनिटाइजरको नियमित प्रयोगले बेफाइदासमेत हुने अर्थात् छालामा केही समस्यासमेत देखापर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।लामो समयसम्म मास्क प्रयोग गर्दा अनुहारमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिने गरेको छाला तथा कपाल रोग विश
चिनियाँ इन्जिनियरमाथि भएको आत्मघाती हमलामा भारत र अफगानिस्तानको हात रहेको पाकिस्तानको आरोप
बेसारको पातबाट बन्छ महंगो तेल
वनस्पतिको हात, डाँठ, जराको प्रयोग र यसको महत्व बुझ्ने हो भने कुनै पनि कुरा खेर जाँदैन । कुनै पनि वनस्पतिको हरेक भाग उपयोगी हुन्छ भन्ने प्रमाणित बर्दियाका एक युवाले गरेका छन् । गुलरिया नगरपालिका– १० रत्नापुरका २४ वर्षीय पवनकुमार बर्माले गाँउघरमा खेर गइरहेको कलप्टिस र बेसारको पातबाट तेल निकाल्ने नयाँ प्रविधि शुरुआत गर्नुभएको छ । …
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट बच्ने उपायमा नियमित साबुन–पानीले हात धुनु, तातो पानी सेवन गर्नु, हात मिलाउन छोड्नु, बाहिर जाँदा माक्स प्रयोग गर्नु प्रमुख मानिन्छ । यसो गर्नाले अन्य रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको सिँगान तथा खकारका साथै सूक्ष्म थोपाहरू आँखा, नाक वा घाँटीको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दछ । धेरैजसो अवस्थामा […]